नेपालको भुमी भारतबाट फिर्ता गर्न माग बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई समेत यस्तो पत्र ? (भिडियो सहित) - Taja Report
Homeभिडियोनेपालको भुमी भारतबाट फिर्ता गर्न माग बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई समेत यस्तो पत्र ? (भिडियो सहित)
July 13, 2018 भिडियो Comments Off on नेपालको भुमी भारतबाट फिर्ता गर्न माग बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई समेत यस्तो पत्र ? (भिडियो सहित)
हजुरलाई थाहा छ ? एक मुखे रुद्राक्ष को दर्शनले नसोचेको ठाउबाट धन “लाभ” हुन्छ जति सक्दो शेयर गर्नु होस ।।।